मुन्द्रा लाउनेसँग नडराउनुस्, गैंडासँग नलोभिनुस् ! |
मुन्द्रा लाउनेसँग नडराउनुस्, गैंडासँग नलोभिनुस् !
प्रकाशित मिति :2019-12-07 17:47:08
पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कर्मचारीको कुशलता कार्यालयको गेटदेखि नै झल्किनुपर्ने बताएकी छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आज (शनिवार) पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी’ गोष्ठीमा कर्मचारीलाई निर्देशन गर्दै मन्त्री अर्यालले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता के हो भनेर गेटदेखि नै झल्किनेगरी काम गर्न आग्रह गरिन् ।
“बाहिरैदेखि मालपोत र नापी सुध्रिएछन् भन्ने देखाउनेगरी काम गर्नुस् । सेवाभावका साथ प्रस्तुत हुनुस् । कमजोर मनस्थिती नबनाउनुस्ˮ मन्त्री अर्यालले भनिन् । जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर काम गर्न आग्रह गर्दै गल्ती नगरेसी डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले भनिन्, “तपाइहरु जो पवित्र हुनुहुन्छ डराउनुपर्दैन । तपाइको टेबुलमा आएर गल्ती नगरेकालाई अख्तियारले लगेको छैन । गल्ती गरेको प्रमाणै फेला परेपछि त के गर्नु त !ˮ मन्त्री अर्यालले थपिन्, “काम ढिलो गरेर पैसा लिन्छन् भन्छन् । हो की होइन म जान्दिन । यो कुरा मनमनै राख्नुैहोला । यदि हो भने त्यस्तो गर्नु भएन । परिवर्तनको अनुभूति तपाईंहरूको टेबुलबाटै देखिने हो ।ˮ
राम्रा कर्मचारीको संरक्षण गरिने भन्दै उनले बिनाकारण कसैलाई पनि अन्यायमा नपारिने बताइन् । तर गलत काममा भने साथ नदिने उनले प्रष्ट पारिन् ।
काम गर्नेक्रममा ठूला मुन्द्रा लगाउने विभिन्न व्यक्तिहरूसँग नडराउन समेत मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् । काम गर्ने क्रममा विभिन्न प्रलोभनमा नपरेर राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुन अर्यालले कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्, “ठूल्ठूला मुन्द्रा लाउनेसँग नडराउनुस् । गैंडासँग नलोभिनुस् ! इमान्दार भएर सेवाग्राहीको सेवामा समर्पित हुनुस् ।ˮ
मन्त्रालय नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै उनले बेथितिका कारण कहिलेकाहिँ निराश हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताइन् ।
सेवा प्रवाह, आचरणका क्षेत्रमा केही न केही फरकपना आइदियोस भन्ने अपेक्षा रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । “हामीमाथि औला ठडिएको छ । औला ठडिएपछि केही न केही फरकपना आउनैपर्छ,ˮ मन्त्री अर्यालले भनिन्, “हाम्रो आचरणमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रश्न उठेपछि सावधानिपुर्वक कामकारबाहीमा कँही प्रश्न नउठोस् भनेर सचेत हुनुस । कँहीनेर प्रश्न पनि नउठोस् । तपाइहरू संस्कारित बन्दिनुस ।ˮ
सहभागी गण्डकी प्रदेशभरका भूमि तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई सचेत गराउदै मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा गरेका परिवर्तन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति हुने बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्नै मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले भूमि र नापी दुवै जग्गा व्यवस्थापनका निम्ती स्थापना गरिएको भन्दै जनतालाई सुबिधा हुनेगरी समन्वयतात्मक ढंगले काम गर्न आग्रह गरे । एउटा काम केन्द्रित र अर्को मुद्रा केन्द्रित जनशक्ति रहेको भन्दै कामकेन्द्रित भएर काम गर्न सचिव गौतमले आग्रह गरे ।